Mila miomana handeha an-tongotra: tsy hiasa ny taxi-be rehetra sy ny kamiao amin’ny alarobia | NewsMada
Mila miomana handeha an-tongotra: tsy hiasa ny taxi-be rehetra sy ny kamiao amin’ny alarobia
Tsy maintsy handeha an-tongotra avokoa ireo vahoaka (mpiasa, mpianatra) mpandeha taxi-be amin’ny alarobia ho avy izao. Tsy nahafapo ny mpitatitra ny valin-teny avy any amin’ny minisiteran’ny Fitaterana ny alarobia teo nandritra ny fihaonana ka raikitra ny fampitsaharana ny asa fitaterana rehetra na olona na entana eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Tsy hiasa ny kaoperativa ao amin’ny UCTU, UCTS, sy ny fiarabe mpitatitra entana mandritra ny tontolo andro, araka ny fanazavan’ny filohan’ny UCTU, Randrianatoandro Lovasoa.
“Compensation” iray volana amin’ny fito volana mbola trosa no homen’ny fanjakana amin’ny volana jolay ho avy izao ka tsy mety amin’ny mpitatitra izany, hoy ny nambarany.
Vahaolana natolotry ny fanjakana ny compensation fa tsy nangataka an’izany velively ny mpitatitra. Noho ny fandaminana, nanaiky ny mpitatitra nefa fito volana ny trosa.
Hiditra amin’ny dingana faharoa, ady amin’ny fiakaran’ny vidin-tsolika ny mpitatitra satria izy ireo ny 95% amin’ny mpanjifa solika eto amintsika. Fantatra fa hiakatra 150 Ar ny vidin’ny gazoala amin’ny faran’ny volana jona ary tanjona ny hahazoana ny vidiny marina 4500 Ar ny litatra amin’ny gazoala, raha ny fanazavany ihany. Be loatra ny hetra samihafa alain’ny fanjakana amin’ny solika fa izay no mampiakatra ny vidiny matetika.
Tsy te hampiakatra ny saran-dalana ny mpitatitra satria samy vahoaka avokoa na ireo mpandeha na izy ireo mpitatitra. Vahaolana farany ny fanondrotana saran-dalana fa mbola ady amin’ny fampiakarana ny vidin-tsolika no hatrehana izao.
Manana roa andro hiomanana amin’ny fiatoan’ny asa fitaterana rehetra eto an-dRenivohitra ny mponina.